သူမရဲ့ပုံတွေကို Photoshop တွေနဲ့ပြင်ထားပြီး ဆင်ခြေထောက်မလို့ပြောတဲ့သူတွေကို အပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ကြောင်း သက်သေနဲ့တကွချပြလိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး - Han Nyein Oo
Cele News • celebrity news
သူမရဲ့ပုံတွေကို Photoshop တွေနဲ့ပြင်ထားပြီး ဆင်ခြေထောက်မလို့ပြောတဲ့သူတွေကို အပြင်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ကြောင်း သက်သေနဲ့တကွချပြလိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ မော်ဒယ် ရွေရူပါဦးကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ မော်ဒယ်တစ်ယောက် လို့သူမကိုယ်သူမ ပြောနေnကြပေမဲ့ ပရိသတ်တွေ.ကတော့ သူမကိုတပ်ချစ်သူလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်နော်.
တစ်ချို့.ဆိုရင်သူ.မကို ခုမှမြင်ဖူးတာ.ဆိုပြီးတောင် ရေးသားနေကြပါတယ်။ မကြာခင်ရက်ပိုင်းတုန်း.ကတော့ သူမကို အဘတွေ.က စီစဉ်ပေးမှုတစ်ခုMကြောင် ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ လူတွေ..အကြား ပွဲဆူသွားရပြန်ပါ.တယ်နော်..
အခုလဲ လူပြောများ.နေတဲ့ သူမရဲ့ခြေထောက်ဟာ လူတွေ ထင်နေသလို ဆင်ခြေထောက်မဟုတ်ကြောင်းသက်သေနဲ့.တကွ ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်နော် သူမရဲ့ ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာများကို ပရိသတ်သိအောင် ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်“ဆင်ခြေ.ထောက်မ” ဆိုသော မသမာသူ.တွေလုပ်ကြံ.ထားတဲ့ကိစ္စကို ရွှေ ပထမဆုံးနဲ့.နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်း.ချင်ပါတယ်… သိက္ခာ.အတွက်ရှင်းရ.ခြင်းဖြစ်ပါတယ်🙏
ရွှေက တပ်ထောက်ခံ.သူဆိုတာမှန်ပါတယ် လူတိုင်း…လွတ်လပ်စွာ အားပေး ခွင့်ရှိ.ပါ…တယ်ဒါပေမဲ့ ဒီ.ကလူတွေက သူမ.တူ ရန်သူ.လုပ်တာ ကြောင့် ရွှေကို အမျိုး.မျိုးတိုက်ခိုက်နေ.ကြတာပါ
ဆင်ခြေ.ထောက်မလို့အမည်တွင်စေ.တဲ့ပုံကိစ္စကို.ပြောချင်ပါတယ် အဲ့ပုံက 2018.တုန်းက Novotel Hotelကပွဲတခုမှာေ ရွှရိုက်ထား.တာပါ… လူတွေက Photoshotတွေ…နဲ့ပုံစံမကျ.အောင်ခြေထောက်နဲ့…. ရင်သား.နေရာတွေကို ပြင်ပြီးဖြန့်ထား.တာပါနော်
ရွှေ…အခုမှမူလပုံ ပြန်ရှာ…တွေ့လို့ ပုံ.အတုနဲ့ အစစ်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြ…ထားပါတယ် 😇🙏ပုံအတုကိုယုံခြင်လဲ… ယုံကြပါနော် မယုံရင် အပြင်မှာ…ဆုံရင် ခြေသလုံး.ကို စိတ်ကြိုက်လှန်ကြ.ည့်လို့ရပါတယ်နော်😃လူအချင်းချင်း…လှည့်ပတ်ခြ.င်း ကင်း….ရှင်းကြပါစေ😇
shwe yupar oo
🔴 သူမရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတချို့က ပုံတွေကို ယူသုံးကာ...
🔴 နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဖျော်ဖြေတဲ့တစ်ကိုယ်တော်ပွဲမှာ...
🔴 ပုဒ်မ ၅၀၅ ပယ်ဖျက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း...